Boqollaal arday oo ka badbaaday weerkii Jaamacadda Gaarisa oo ka qalinjabiyay jaamacadda Moi - Halbeeg News
Boqollaal arday oo ka badbaaday weerkii Jaamacadda Gaarisa oo ka qalinjabiyay jaamacadda Moi
GAARISA (HALBEEG)- In ka badan 300 oo arday oo kamid ahaa ardaydii ka badbaaday weerarkii Argagaxisanimo ee 2015-kii lagu qaaday jaamacad ku taalla Gaarisa ayaa shalay ka qalin jebiyay jaamacadda Moi University kadib xaflad halkaasi loogu qabtay.
Ardayda shalay ka qalin jebiyay jaamacadda Moi University ayaa u badnaa ardaydii ka badbaaday weerarkii bahalnimada ahaa ee lagu qaaday Jaamacadda Gaarissa kuwaa oo usoo badashay jaamacadda Moi.
Professor Isaaq Kosgei, guddoomiye ku xigeenka jaamacadda Moi oo xafladda ka hadlay ayaa u hanbalyeeyay bogaadina u diray 300 oo arday oo kamid ahaa kuwii ka badbaaday weerarka lagu qaaday Jaamacadda ismaamulka isaga oo sheegay in ay usoo dulqaateen caqabadihii adkaa ee soo wajahay dhameeyeenna waxbarashadoodii jaamacadda.
“Liiska qalin jebiyeyaasha xafladeena 37-aad waxaa ku jira in ka badan 300 oo arday oo kamid ahaa ardaydii ka badbaaday weeraray lagu qaadaya jaamacadda Gaarisa, falalka Argagaxisada kama hor istaagin in ay ka dhabeeyaan riyooyinkooda. Wax aan u mahad celineynaa dowladda iyo dhammmaan deeq bixiyeyaasha u yimid gargaarkooda, hagidooda iyo la talintooda intaba, kaalmadooda ayaa dhalinyarada ka caawisay gaaridda riyooyinkoodi” ayuu Prof Isaaq Kosgei.
2-dii bishii Abriil 2015, rag hubeysan oo la aaminsan yahay in ay ka tirsanaayeen ururka Al-shabaab ayaa weeraray xarunta jaamacadda Moi ee Gaarisa iyaga oo halkaasi ku dilay in ka badan 148 qof oo u badnaa arday iyo ciidan, waxaa sidoo kale dadka la dilay ku jiray ilaaladii jaamacadda iyadoo dad kalena uu dhaawac soo gaaray.
Ururka Al-shabaab oo toboneeya qof ka afduubtay gobolka Shabeellaha Dhexe
Taliyaha ciidamada oo magacaabay taliyaal cusub kuwa kalana xilalkii ka qaaday